Kedu ihe bụ SQL? | Martech Zone Mkpebiri
Martech Zone » Mkpebiri » Acronyms na-amalite na S	» SQL
SQL bụ acronym maka Ahịa ruru eru Lead.
Onye ahịa a na-atụ anya ya nke gafere site na pipeline ahịa - site na ịzụ ahịa-onye ruru eru site n'aka ndị ahịa na-anakwere ụzọ - gaa n'ọnọdụ ebe ndị na-ere ahịa nwere ike ịrụ ọrụ ugbu a n'ịgbanwe ha ka ha bụrụ onye ahịa na-arụsi ọrụ ike.
SQL bụ acronym maka Asụsụ Ajụjụ Ejiri Mara.
Asụsụ eji na mmemme na emebere maka ijikwa data ejidere na sistemụ njikwa nchekwa data mmekọrịta, ma ọ bụ maka nhazi iyi na sistemụ njikwa iyi data mmekọrịta. Okwu syntax na ọbá akwụkwọ nke ọrụ nwere ike ịdị iche n'etiti nyiwe nchekwa data.